YEYINTNGE(CANADA): Thursday, March 01
Uploaded by greenkernel on Feb 20, 2012
New era of rock and hip hop in Myanmar
Ploy Bunluesilp is the NBC News Bureau Producer in Bangkok. She has reported from Myanmar five times since 2006. She was most recently on assignment in Yangon, Myanmar's commercial capital, in early December for U.S. Secretary of State Hillary Clinton's meeting with pro-democracy icon Aung San Suu Kyi.
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/01/20120အကြံပြုခြင်း
Canada နိုင်ငံရှိ Carleton University ၏ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှု
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့က Canada နိုင်ငံရှိ Carleton University ၏ Porter Hall တွင် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ စုဝေးပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။Skype နှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာပြည်၏အပြောင်းအလဲများမှာ စစ်တပ်က အာဏာကိုင်ထားသမျှ
နောက်ပြန်မလှည့်နိုင်ဟု မပြောနိုင်ကြောင်း၊ ယခင် ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်း ရွေးကောက်ပွဲကို အတန်အသင့်မျှတအောင် လုပ်ပေးခဲ့သော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ကတိစကားမတည်ဘဲ လုပ်ချင်ရာလုပ်ခဲ့သည့် သာဓကရှိခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲပြီး နောက်ပိုင်းအခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ရန်လိုကြောင်း၊ စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများမှာ ထိရောက်ကြောင်း၊ ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခြေအနေကို မူတည်ပြီးသာ ဆန်ရှင်မူဝါဒကို ပြောင်းလဲသင့်ကြောင်း စသည်ဖြင့် ပြောကြားထားသည်။
ကြိုဆိုရေးယာဉ် မဟာမုနိဘုရားကြီးကို ဦးခိုက်
Maung Ni Oo facebook
ဒီမိုကရေစီမှာဆိုလို့ရှိရင် အာဏာခွဲဝေရေးဆိုတာရှိတယ်။ အဲဒါဘာလဲဆိုတာ အကြမ်းဖျဉ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာရယ်၊ တရားစီရင်ရေးအာဏာရယ် နောက်ပြီးတော့ ဥပဒေပြုရေးအာဏာရယ် တရားရေးမဏ္ဍိုင်ရယ် ခွဲခြားထားတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာတော့ အစိုးရအဖွဲ့ပေါ့။ ဥပဒေပြုရေးဆိုတာတော့ လွှတ်တော်ပေါ့။ တရားရေးမဏ္ဍိုင်ကတော့ တရားသူကြီးတွေအခရာဖြစ်တဲ့ တရားရုံးတွေပေါ့။ ဒီလိုသုံးပိုင်းခွဲထားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ သုံးပိုင်းခွဲထားလဲဆိုတော့ အဖက်ဖက်ကနေပြည်သူရဲ့အကျိုးကိုထမ်းဆောင်နိုင်အောင်လို့။ လွှတ်တော်ရဲ့တာဝန်က ဘာလဲ။ ဥပဒေနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်ဖို့ပဲ။ ဥပဒေနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ ကျွန်မတို့ဘာလုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုတော့ လွှတ်တော်အတွင်းကနေပြီးတော့ ပြည်သူလူထုကို မလိုအပ်ဘဲနဲ့ ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ထားတဲ့ ဥပဒေတွေဖယ်ရှားရေးအတွက် ကျွန်မတို့ ပထမလုပ်သွားရမယ်။ (ဟေးးးး)
ကျွန်မတို့ ဒီမိုကရေစီအတွက်ရုန်းကန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် အတွင်းမှာဆိုရင် ကန့်သတ်ထားတဲ့အချက်အမျိုးမျိုး ချုပ်ချယ်ချက်အမျိုးမျိုး ဖိနှိပ်ချက်တွေ အမျိုးမျိုးကြားထဲကနေ ကျွန်မတို့ ရုန်းကန်ပြီးတော့ လုပ်ရတယ်။ အခုဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်မတို့က အရင်ထက်စာရင် အခွင့်အရေးတွေ အများကြီး ရလာပါပြီ။ ဒီလိုအခွင့်အရေး ရအောင်လို့ လုပ်ပေးခဲ့တာတွေ အားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ ကျွန်မတို့ဟာ အားလုံး သွေးရင်း ညီအစ်ကိုတွေလို လက်တွဲ ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ ကျွန်မတို့ ဟာအခြား အဖွဲ့အစည်းတွေကို လည်းတိုက်ခိုက်ချင်တဲ့စိတ် မရှိပါဘူး။ ကျွန်မတို့ကိုမဲပေးပါလို့ ပြောတာဟာ အခြားအဖွဲ့ အစည်း တွေကိုမဲမပေးပါနဲ့လို့ ပြောတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ အဲဒါကတိုက်ခိုက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး ။ မဲကတစ်ပြားတည်းပဲရှိတယ်လေ တစ်ပါတီပဲပေးလို့ရတာလေ။ လက်တွေ့ ကျကျပြောတာပါ အဲဒီတော့ ကျွန်မတို့ကိုပဲပေးပါလို့ ပြောပါရစေကျွန်မတို့ အနေနဲ့မဲဆွယ်တဲ့ နေရာမှာလာဘ်ပေးပြီးတော့လည်း မဲမဆွယ်ဘူး။ ခြိမ်းခြောက်ပြီးတော့လည်း မဲမဆွယ်ဘူး။ လာဘ်ပေးပြီးတော့ မဲမဆွယ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေကိုတာဝန်သိစိတ်ရှိစေချင်လို့ ကျွန်မတို့က ကျွန်မတို့ကိုမဲပေးပါ၊ ဟိုဟာ ကြီးဖြစ်စေရမယ် ဒီဟာကြီးဖြစ်စေရမယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောရင် ပြည်သူတွေမှာ ဘာတာဝန်မှမရှိသလိုပဲ။ ကျွန်မတို့က မိုးပေါ်ကကျလာတဲ့ နတ်တွေမဟုတ်ဘူး။ ဖြစ်စေချင်သလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ အဲတော့ အားလုံးက၀ိုင်းပြီးတော့ ရုန်းမှရမယ်။ အဲတော့ ကျွန်မတို့က ပြည်သူတွေကိုကတိက၀တ်တွေ လွယ်လွယ်ပေးပြီး တော့မစည်းရုံးဘူး ။ လာဘ်ထိုးဖို့ ဆိုတာကလည်းအဖွဲ့ချုပ်မှာ ပိုက်ဆံမှမရှိတာ။ ပြည်သူဆီကနေပြန်တောင်းနေရတာ ။ အဲတော့လာဘ်ပေးရင်းနဲ့လည်းမစည်းရုံးဘူး။ ပိုက်ဆံရှိရင်တောင် အဲဒီနည်းနဲ့ မစည်းရုံးဘူး ။ နောက်ပြီးကျွှန်မတို့က ပြည်သူတွေကို ခြိမ်းခြောက်ပြီးတော့လည်းမပြောဘူး။ ကျွန်မတို့ကိုမဲမပေးရင် ဘာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းမပြောဘူး။ စဉ်းစားပါ ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပါ ။ ကျွန်မတို့အဖွဲ့ကိုမလိုလားဘူးဆိုရင် ဘယ်အဖွဲ့ကိုလိုလားမလဲ။ အဲဒီလိုလားတဲ့ အဖွဲ့က နိုင်ငံအကျိုးအတွက်ဘယ်လောက်သယ်ပိုးနိုင်မလဲ သေသေချာချာစဉ်းစားပါ။ သေသေချာချာ စဉ်းစားပြီးတော့ ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ပါ။ ကျွန်မတို့ကနောက်ဆုံးတော့ ပြည်သူတွေဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်ခံရမယ် ။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာဒါပဲ။ ပြည်သူတွေရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ပွဲလေးပဲ။
အများသိကြမှာပေါ့နော်ဒီဆန်ရှင်ဆိုတဲ့ကိစ္စ။ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကြောင့် ပြည်သူတွေကဆင်းရဲတယ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာနဲ့ပတ်သတ်လို့ရှည်ရှည်ဝေးဝေးမပြောပါဘူး ။ အချို့လုပ်ငန်းတွေကိုထိခိုက်တာတော့ရှိပါတယ်။ သို့သော်ငြားလည်း ကျွန်မတို့ နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပြသာနာဟာ ဒီဆန်ရှင် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကြောင့် တခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကိုတော့ ပြည်သူတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့ လိုတယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်မတို့ နိုင်ငံဟာ တကယ့်ကိုစစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတာ သေချာပြီးဆိုတာနဲ့ ဒီနိုင်ငံကို ကူညီပေးကြမယ့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ၀ိုင်းပြီး ကူညီပေးမဲ့အဖွဲ့ အစည်းတွေကလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကူညီနိုင်တဲ့ သူတွေကူညီချင်အောင်ကျွှန်မတို့က လုပ်ကြရပါမယ်။ ကူညီချင်အောင် မလုပ်ပြနိုင်ရင် ကူညီမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကို ကျွန်မတို့ သွားကြရမယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ မှန်ကန်တဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒေတွေကို ချမှတ်ရမယ်။ အဲဒါတွေကျတော့လွှတ်တော်လည်းပါလာမယ်၊ အစိုးရလည်းပါလာမယ်။ အဓိကကတော့ပြည်သူတွေလည်းပါလာရမယ်။ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဖြစ်သင့်ဖြစ် ထိုက်တာကို ထောက်ပြရမယ်။ မဖြစ်သင့်မဖြစ်ထိုက်တာတွေ ဖြစ်နေတာကိုလည်း ထောက်ပြရမယ်။
လွတ်လပ်ရေးကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရဖို့ အခုခေတ်က ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပေါ့။ ကျွန်မတို့ အားလုံးတွဲပြီးလုပ်မှ စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီမြန်မြန်ရနိုင်မယ်။ ဒီတော့ တန်းတူညီတူ ရှိမှုဆိုတာရှိရမယ်။ အဲဒီတုန်းက ဖေဖေတို့ ပြောခဲ့တာတော့ ကချင်တစ်မတ် ဗမာတစ်မတ် ပေါ့ နော်။ အဲဒါကတော့ ကချင်တမျိုးတည်းပြောခဲ့တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တိုင်းရင်းသားအားလုံး ညီညီမျှမျှပေါ့။ ဗမာလည်းတစ်မတ် ပအို့ဝ်လည်းတစ်မတ် ပလောင်လည်းတစ်မတ်ပေါ့နော်။ အာလုံးတန်းတူညီတူရှိရမယ်လို့ ပြောတာ။ ပြီးတော့ ပြည်နယ်တွေဟာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ဖို့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းဖို့ဆိုတာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ ပြထားရတယ်။ ဒါပဲနောက်ဆုံးကျတော့ အားလုံးညှိနှိုင်းပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားအားလုံး သဘောတူညီနိုင်တဲ့အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ တစ်ခုနဲ့ဒီနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ရမယ်။ ဒီတော့ အားလုံးညှိနှိုင်းရမယ်။ တည်ဆောက်ရမယ်။ ကျွန်မတို့အားလုံးဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့ဖြေရှင်းရမယ်။ ကျည်ဆန်နဲ့ မဖြေရှင်းရဘူး၊ ဆွေးနွေးချက်နဲ့ ဖြေရှင်းရမယ်။ ကျွန်မတို့ စားပွဲဝိုင်းမှာ ထိုင်မယ်၊ စကားပြောမယ်ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆို တော့သူငယ်ချင်းအချင်းချင်းတောင် ရန်ဖြစ်ရတယ်လေ။ ဒါကတော့လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်မဖြစ်မနေ အောင်မြင်အောင် လုပ်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်။
၀န်ထမ်းများလစာတိုးရေး ၀န်ထမ်းမဟုတ်သောပြည်သူများကို ငဲ့ကွက်ရန်လိုဟု သမ္မတကပြောကြား
by Yangon Press International on Thursday, March 1, 2012 at 6:57am ·
မတ် ၁၊ ၂၀၁၂ (YPI)
အစိုးရ၀န်ထမ်းများလစာတိုးပေးရေးစဉ်းစားရာတွင် ယင်းလုပ်ရပ်၏ အကျိုးဆက်ကိုခံစားရမည့် အစိုးရ၀န်ထမ်းမဟုတ်သည့် ပြည်သူများအား ငဲ့ကွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ယနေ့ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် မိန့်ခွန်းပြောရာ၌ ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
သမ္မတက “ လစာတိုးလို့ ၀န်ထမ်းမဟုတ်တဲ့ ၅၈ သန်းသောပြည်သူတွေဟာ အဲဒီအကျိုးဆက်ကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကို စဉ်စားဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
၎င်းကထပ်မံပြီး ယခုအချိန်တွင် မိမိတို့နိုင်ငံ၌ လူတန်းစားကွာဟမှု၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုများ ကြီးကြီးမားမားရှိနေသေးပြီး ပြည်သူတစ်ဦးချင်းဝင်ငွေများနိမ့်ကျနေသေးကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့အချိန်တွင် ၀န်ထမ်းများအနေဖြင့် ကုန်ကျစားရိတ်နည်းအောင် စိတ်ရင်းစေတနာအရင်းခံပြီး လုပ်ဆောင်ကြရန်ပြောကြားလိုကြောင်း ဆိုသည်။
စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှ အငြိမ်းစားပါမောက္ခ ဦးမော်သန်းက “ လစာတိုးရင် ၀န်ထမ်းတွေက အကျိုးရှိမယ်ဆိုပေမယ့် အပြည့်အ၀တော့မဟုတ်ဘူး။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဒဏ်ကို သူတို့ပါပြန်ခံစားရမှာ။ ကျန်တဲ့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကတော့ အကျိုးမရှိဘဲ အပြစ်ကိုချည်းပဲ အပြည့်အ၀ခံစားရမယ့်သူတွေဖြစ်သွားမယ်” ဟု ပြောသည်။
၀န်ထမ်းများလစာတိုးမြှင့်ရေးနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးလှထွန်းကလည်း ၀န်ထမ်းများလစာတိုးမြှင့်ပေးလိုပါက ငွေစက္ကူအသစ်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ဖြေကြားခဲ့သည်။
ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်ပြီး မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းက ၀န်ထမ်းများလစာတိုးမြှင့်ပေးသင့်သကဲ့သို့ ကုန်ဈေးနှုန်းများလိုက်ပါမြင့်တက်ခြင်းမရှိအောင်လည်း အစိုးရအနေဖြင့်ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းပြောကြားသည်။
၀န်ထမ်းများ လစာတိုးမြှင့်ပေးရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့အဆိုတင်သွင်းခဲ့သည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းကမူ ၀န်ထမ်းများလစာတိုးရေးအား နောက်မဆုတ်ဘဲဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် ၀န်ထမ်းများအား လစာတိုးမြှင့်ပေးရေးအစီအစဉ်ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရှိ ကိုယ်စားလှယ်အများစုက ထောက်ခံလျက်ရှိကြောင်း အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင်ကဆိုသည်။
၀န်ထမ်းများအား လစာတိုးမြှင့်ပေးရေးအစီအစဉ်ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမည့် အခြေအနေတွင်ရှိနေသည်။
ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြင်ဆင်ချက်နှင့်ပတ်သတ်ပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် မဲခွဲဆုံးဖြတ်စဉ်က သမ္မတ၏သဘောထားမှတ်ချက်ကို ထောက်ခံသူများဘက်မှ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ဘူးသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ငွေကြေးဖေါင်းပွမှုနှုန်း လျှင်မြန်စွာမြင့်တက်လာသည့်နောက် ၀န်ထမ်းလစာတိုးပေးခြင်းနှစ်ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးအကြိမ်တိုးမြှင့်ခြင်းမှာ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလကဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးမှသာ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကို ရုပ်သိမ်းသွားမည်
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ ဗြိတိန်၊ အီတလီ၊ ဂျာမနီ၊ ရိုမေးနီးယား နဲ့ ဘယ်ဂျီယံ နိုင်ငံတွေက ဥရောပပါလီမန် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင် ၁၁ဦး ကို ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၉ ၇က်နေ့က သူမရဲ့နေအိမ်မှာ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ဥရောပ ပါလီမန်အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကို ရုတ်သိမ်းဖို့ဆိုရင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ချွင်းချက် မရှိ လွှတ်ပေးဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် မိန့်ခွန်းအပေါ် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးရဲ့ အမြင်သဘောထား
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှမ်းပြည်နယ်ကလောသို့ နိုင်ငံရေးခရီးစဉ်
Pyae Phyoe Maung
Canada နိုင်ငံရှိ Carleton University ၏ ဒေါ်အောင်ဆန...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးမှသာ စ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှမ်းပြည်နယ်ကလောသို့ နိုင်ငံရေး...